Songandina Archives - Page 974 sur 1062 -
Coupe du Président : Nahazo fanamiana manokana ny mpitsara
01/04/2017 admintriatra 0
Hanomboka anio hatramin’ny 8 Avrily izao ny dingan’ny famaranana amin’ny « Coupe du Président » eo amin’ny taranja basikety, antsoina hoe « Top 8 ». Noho izay indrindra, nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanohanana tanteraka ity hetsika ity ny …Tohiny
Kaominina Toamasina : Ny Mapar ihany no manongana Mapar
Mibaribary ny tsy fitovian-kevitra. Fantatra ankehitriny fa naongan’ny Lefitra voalohan’ny Kaominina Toamasina (CUT) ny Ben’ny tanàna, Elysée Ratsiraka. Ry zareo samy avy amin’ny antoko Mapar ihany no mifandaka sy mifamingana an-toerana ao amin’ny Kaominina Toamasina. …Tohiny
« 1 … 972 973 974 975 976 … 1 062 »
Mandalo sy nandalo vanim-potoana goavana ny firenena tamin’ity taona 2018 ity. Tsy inona akory izany fa ny fanatanterahana ny fifidianana Filoham-pirenena, izay ny 7 novambra lasa teo ny fihodinana voalohany, ary omaly 19 desambra kosa ...Tohiny